संसदमै ओलीको बकमफुसे उखान टुक्कामाथि सांसद देवकोटाले दिइन् यस्तो दनक, मुछियो मन्त्रीहरूको नाम
काठमाडौं । प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसकी नेतृ तथा राष्ट्रियसभाकी सांसद अनिता देवकोटाले देशमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार आएदेखि काण्डैकाण्ड मुछिएको बताएकी छन्। उनले सरकारको एक वर्षे कार्यकाल सानो सानो काण्ड नभएर देश नै हल्लिने काण्डैकाण्डमा बितेको आरोप लगाएकी छन् । सभाको बिहीबार बसेको बैठकमा बोल्दै सांसद देवकोटाले प्रधानमन्त्री ओलीको ‘हेर्दाहेर्दै भैंसी ब्यायो, दूध पनि दियो‘ भन्ने भनाइको जोडदारका साथ खण्डन गरेकी छन् ।
सांसद देवकोटा विशेष समयमा बोल्दै भनिन्, ‘हिजो मात्रै प्रधानमन्त्री ज्यूले भैसी पनि ब्यायो, दूध पनि दियो भन्नु हुन्थ्यो । भैसी कस्तो ब्यायो? दूध कोकोलाई पुग्यो सभाध्यक्ष ज्यू ?’ ‘भैसीको दूध सिंहदरबारभित्र बस्ने मन्त्रीहरूलार्इ मात्रै पुग्याे की अरूलार्इ पनि?।’
प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार राजधानीमा आयोजित ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ मा सरकारको एक वर्षे सफलता सुनाउँदै ‘हेर्दाहेदैै भैसी ब्यायो ! दूध पनि दियो, पाडी पनि पायो ! ‘ नेपाली जनताले देख्न खोजेको दिन यही हो’ भनेका थिए ।
अाेलीकाे यस्ताे उखान टुक्काका भनार्इलार्इ काँग्रेसले खण्डन गर्दै देशकाे विकास र जनताकाे पक्षमा अाेली नेतृत्वकाे सरकार उनका मन्त्रीहरूलार्इ लाग्ने सुझाएकाे छ। अाेलीकाे यस्ताे उखान टुक्काका भनार्इलार्इ लक्षित गर्दै काँग्रेसले अाेली प्रचण्ड नेतृत्वकाे सत्तारूढ दल नेकपाले झुठकाे राजनीति गरिरहकाे अाराेप लगाएकाे छ।